Shirkadaha waaweym dalka oo faa'idooyin soo bandhigey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkadaha waaweym dalka oo faa'idooyin soo bandhigey
La daabacay torsdag 30 januari 2014 kl 11.17
Shirkado badan oo ah kuwo ugu waayeyn suuqa seylada ganacsiga ayaa maanta siideynaya warbaxinadooda sadex bilood laha ah. Bangiyada oo ayaga badankood faa’idooyin ku soo bandhigey warbaxinadooda ayaa saas oo ay tahay sheegey in ay shaqada ka eryi donaan shaqaalo badan si ay maal u keydsadaan. Sidoo kalena waxaa sii kordhey faa’idooyinka ay helayaan saamileyda shirkada, taas oo ah wax ay ururada shaqaalaha dhaleeceysan yahiin.
Pia Gripenberg oo ah saxafiyad wax ka qorta arimaha dhaqalaha oo ka howl-gasha wargeyska DN ayaa u shegtey laanta p1-morgon in faa’idooyinkan ay shirkadaha qaybinayaan ay yahiin hanti u arurtey intii lagu jirey xaaladii cakirneyd ee dhaqaalaha, shirkadahuna aysan garaneynin wax ay ku sameeyaan faa’idooyinka u aruurey.
- Waxaa la arkaa in faa’idooyinka saamiga lagu qaybinayo lacag ahaan, sababtana waxa weeye shirkadaha ayaa u jeedin wax maagelin istaahila oo ay maalgashadaan, sidaa daraadeed waxey qabaan in aysan lacagta u baahneyn.
- sina wey u fiican tahay sina wey u xuntahey taas. Sida u fiican tahay waxa weeyey shirkadaha in faa’idooyinka u celiyaan saami leyda oo ay ayagu go’aan ka gaaraan waxa ay ku sameynayaan lacagta, laakiin waa wax laga xumaado in gabaasi ka jiro dhanka fikradaha oo laga cabsado maal-gashi wax yaabo badan oo la heli karo, waxaa muuqata in shirkadaha ay tartiibsanayaan oo kalsooni xumo ku abuurtey wacyigii adkaa ee dhaqaalo Xumo, ayey tiri.
Shirkadaha waxey sheegeen ay u qaybinayaan faa’idooyin dheeraad ah saami leyda. Laakiin yey yahiin saameyda wax ka helaya faa’idooyinka shirkadah qaybinayaan.
- Maanta gelinka danbe ayey shirkada dharka HM soo bandhigeysaa warbaxinteeda, mulkiilaha shirkadaas waxuu faa’ido u heli doonaa malaayiin. Wallenberg waxuu heli doonaa malaayiin marka ay Atlas Copco waraxbinteeda soo bandhigto iyo kuwo kaloon badan. Laakiin faa’idooyin badan waxey ku soo aadi doonaan shirkadaha maamula lacaga holw-gabnimada, sida Alecta, AMF iyo kuwo kaloo badan. Dhamaanteen kuweena heysta caymiska howl-gabnimada wax ayaan ka heleynaa faa’idooyinka la qaybinayo, ayey tiri.
Shirkadaha warabxinadooda faa’idooyinka soo bandhigey waxaa kamid ah shirkada Ericsson oo soo bandhigey faa’ido dhan 8,9 bilayan oo karoon. Maamulka shirkada ayaa ku taliyey in saamileyda loo qaybiyo faa’ido dhan 23 karoon halka sheer.